Maraykanka Iyo Midawga Yurub Oo Digniin Kulul Kasoo Saaray Ciidamadda Eriteria Oo Ku Laabtay Gobolka Tigray - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Maraykanka Iyo Midawga Yurub Oo Digniin Kulul Kasoo Saaray Ciidamadda Eriteria Oo Ku Laabtay Gobolka Tigray
Washington (ANN)- Maraykanka, ayaa digniin kulul u jeediyay dalka Eriteria, kaddib markii ay kusoo laabteen ciidamaddeedu gudaha dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka Tigray oo ay soo galeen Nov 2020, iyagoo kaalmayna ciidamadda Federaalka Ethiopia ee dagaalka kula jiray maamulka TPLF.
Cadaadis caalami ah oo ka dhashay eeddaymo ciidamadda Eriteria joogitaankooda gobolka Tigray oo la xidhiidhay xasuuq, kufi iyo gabood falo kale, ayaa sababay in bishii Jun 2021, dawladda Eriteria kala baxdo Ethiopia ciidankeeda, balse mar kale ayay kusoo laabteen, kaddib markii dagaalyahanka Tigray dib u qabsadeen gobolka iyo deegaamo kale oo ka mid ah kuwa Amxaarada iyo Canfarta.
Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganay bayaan uu soo saaray Isniintii Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka Antony John Blinken, in ciidamadda Eriteria kusoo laabteen gobolka Tigray si dagaalka ka socda gobolka uga qayb qaataan oo ay u taageeraan ciidamadda dawladda Federaalka Ethiopia.
Diblumaasi Midawga Yurub ah, ayaa sheegay in Eriteria August 20, usoo dirtay ciidamaddeeda gobolka Tigray, kuwaas oo kasoo gudbay xadka gobolka Tigray, sidoo kale wakaaladda Reuter, ayaa sheegtay in heshay warar xaqiijinaya in Ciidamadda Eriteria qabsadeen qaybo ka mid ah galbeedka Tigray, isla markaana qabsadeen Magaalooyinka Adi Gosha iyo Humera, iyagoo ku hubaysan Taangiyo iyo Madaafiic.
Waaxda Khasnada Qaranka Maraykanka, ayaa liiska cunaqabataynta ku daray Saraakiisha Eriteria oo hoggaaminaya ciidanka Eriteria, kuwaas oo hore loogu eeddeeyay xasuuq, kufi iyo tacadiyo ay ka geysteen gobolka Tigray.
Maraykanka iyo Midawga Yurub, ayaa si wadajir ah uga digay in Eriteria ciidankeeda ku laabtaan gobolka oo weli ku jira xaalad adag oo malaayiin qof ku barakaceen, halka kumanaan kale ay ku nafwaayeen dagaalka ka socda gobolka.
Arrintan ayaa kusoo beegantay maalmo kaddib markii ra’iisal wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed booqday caasimadda Eriteria 17 August, iyadoo aan la ogayn ujeedada booqashada, isagoo sidoo kale booqday dalka Turkiga, halkaas oo Madaxweynaha Turkiga Erdogan ka sheegay in dalkiisu doonayo in lasoo afjaro dagaalka gobolka iyo weliba xiisada u dhaxaysa Ethiopia iyo Suudaan ee biyaha webiga Niilka iyo muranka dhulka ee soo ifbaxay markii uu dagaalka Tigray ka bilaabmay gobolka.